शुरुआतीहरूको लागि सौर स्थापनाकर्ता मार्केटिंग रणनीतिहरू - किम्रोय बेली समूह
त्यसोभए तपाईसँग बहु-अरब डलर सौर्य उद्योगबाट केहि गम्भीर पैसा कमाउने भव्य धारणा छ तर तपाईंसँग पहिलो ग्राहक छैन। तपाई कहाँबाट सुरू गर्नुहुन्छ? तपाईं के भन्नुहुन्छ? तपाईं कसरी घरमालिकलाई उनीहरूको घरमा सौर्य शक्ति थप्नको लागि विश्वास गर्न र उनीहरूको पैसाको साथ अझ महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ? यदि तपाईंसँग यी कुनै पनि प्रश्नको उत्तर छैन भने यो सौर स्थापनाकर्ता मार्केटिंग गाईड तपाईंको लागि हो र त्यस्तै हो सोलार स्टेप स्टेप स्थापना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम!
जब म किमरोय बेली नवीकरणकर्ताहरूमा मेरो सौर स्थापना व्यवसाय बढ्दैछु र मैले सौर स्थापनाकर्ता मार्केटिंगको उचित हिस्सा गरेको छु र मेरा सुझावहरू र युक्तिहरू साझेदारी गर्न पाउँदा म खुशी छु। मैले भन्नु पर्छ कि मेरो धेरै मार्केटिंग रणनीतिहरू एक महाकाव्य असफल रहेछ तर दुई विशेष रणनीतिहरूले केही उत्कृष्ट परिणामहरू पाए। यस लेखमा, म ती दुई सौर स्थापनाकर्ता मार्केटिंग सुझावहरू साझा गर्दछु जुन काम गर्दछ र म एउटा उल्लेख गर्नेछु जुन छैन :)।
पहिले तपाई जानु भन्दा पहिले मलाई भन्नु होस्, यस लेखले तपाईलाई फेसबुक, यूट्यूब, समाचार पत्र, टिभी वा रेडियोमा विज्ञापन गर्न भन्दैन। यो एक बुटस्ट्र्यापि solar सौर स्थापनाकर्ता मार्केटिंग गाईड हो जुन तपाईंलाई शून्यबाट तपाईंको नायकमा लगियो। दोस्रो, यो द्रुत फिक्स होईन, एक दिन लेखमा छिटो धनी हुनुहोस्। यी दुई सरल तर गहन सुझावहरूले तपाइँको ग्राहकलाई रूपान्तरण गर्न केहि समय लिने छ तर जब तपाइँ तपाइँलाई यो चाँडै मापन गर्न र तपाइँको बढ्दो सौर स्थापना व्यवसाय बाट स्थिर राजस्व बनाउन जारी दिनेछ।
सौर स्थापनाकर्ता मार्केटिंग रणनीति # १: तपाईंको पहिलो ग्राहक बन्नुहोस् र सौर बार्बेक होस्ट गर्नुहोस्!
तपाईंको भविष्यका ग्राहकहरूका लागि मोडेल प्रणालीको रूपमा तपाईंको घरमा सानो सौर्य प्रणाली स्थापना गर्नुहोस्। यो हुनको लागि तपाईंले बैंकलाई तोड्नु आवश्यक पर्दैन, $ २,००० अमेरिकी डॉलरको साथ तपाईं आफ्नो फ्रिज, एलईडी बत्ती, ल्यापटप, टिभी र तपाईंको घरमा केहि अन्य साना इलेक्ट्रोनिक्सहरू बिजुलीका लागि आधारभूत भरपर्दो सौर्य सेटअप सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यो लेख तपाईंलाई दिन्छ Simple सरल सुझावहरू सौर प्रणाली स्थापना गर्नका लागि $ 3,000 भन्दा कमको लागि। यस प्रणालीको लक्ष्य ग्रिड बाहिर तपाइँको घर लिन छैन तर सौर्य ऊर्जा काम गर्दछ भनेर प्रदर्शन गर्नु हो। यो पनि तपाइँको मासिक ऊर्जा बिल मा केहि पैसा बचत को अतिरिक्त लाभ छ। यद्यपि उत्तम भाग भनेको बिक्री पिचको दुई गुणा फाइदा हो जसले तपाईंलाई केही गम्भीर पैसा बनाउँदछ, र तपाईंको गिनिया सुँगुरले तपाईंलाई सौर्य ऊर्जाको केही सूक्ष्म चीजहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ ताकि तपाईंको ग्राहकहरूको सेवा गर्न अझ राम्रो हुनेछ।
क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको% discount% छुट छ चरण सोलार स्थापना प्रशिक्षण कोर्स द्वारा चरणमा
तपाईको सौर्य ऊर्जा प्रणाली स्थापना पछि स्टेप बाईप सौर प्रशिक्षण कोर्सको सहयोगमा त्यसपछि रमाईलो अंश आउँदछ, अरूलाई तपाईको सौर्य प्रणालीको बारेमा बताउँदछ र तपाइँको पहिलो ग्राहकहरू पाउँदछ। मैले मेरा गिनिया सुँगुर प्रणालीलाई मेरो आमा बुबाको घरमा स्थापना गरेपछि (जहाँ म त्यसबेला बस्दै थिएँ) मैले अरूलाई मेरो सौर स्थापनाको बारेमा बताउने अभिनव तरिकाहरू भेट्टाए। तपाईं खेल दिन, छुट्टी, एक सप्ताहन्तमा, वा तपाईंले आफ्ना मित्रहरू, छिमेकीहरू र व्यक्तिहरूलाई निमन्त्रणा गर्न सक्नुहुने जुनसुकै कारणले सौर्य ऊर्जा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न चासो राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको लागि होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। व्यक्ति नि: शुल्क रमाईलो र नि: शुल्क खाना मन पराउँछन्।
तपाईको प्रणालीलाई धक्का लागी ध्यान दिएर प्राप्त गर्न सजिलो ट्रिक भनेको सौर्य प्रणाली प्रयोग गरेर पाकआउटमा मनोरन्जन टिभी र म्यूजिक प्रणालीलाई शक्ति प्रदान गर्नु हो। यो एक सजिलो कुराकानी स्टार्टरमा आफैलाई उधारो दिन्छ। तपाईको लक्ष्य बेच्ने होइन तर यस सौर्य प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी र प्रभावकारी छ भन्ने तथ्यहरू बताउन हो। तपाईंको उर्जा बिलमा बचतको बारेमा कुरा गर्नुहोस् र तपाईंको नयाँ फेला परेको प्रमाणीकरणबाट सोलार स्टेप स्टेप तपाइँका साथीहरूको लागि सौर्य स्थापनाको 'टाउको' हेन्डल गर्न।
तिनीहरूलाई तपाईंको व्यवसाय कार्ड हस्तान्तरण गर्नुहोस् र एउटा गर्न प्रस्ताव गर्नुहोस् मुक्त सौर्य ऊर्जा मूल्यांकन। सौर मूल्या assessment्कन एक प्रक्रिया हो जुन तपाईं एक व्यक्तिको घरको सौर्य ऊर्जाको नाफा देख्नको लागि विश्लेषण गर्नुहुन्छ, उनीहरूले कति बचत गर्नेछन्, यसको कति खर्च हुन्छ, भुक्तानी विकल्पहरू आदि। यसले उनीहरूलाई पूर्ण सौरमा जाने सम्भावनाको मार्गनिर्देशन गर्दछ वा तपाइँको जस्तै एक स्टार्टर सौर प्रणाली प्राप्त गर्दै र बिक्री रूपान्तरण बन्न। ग्राहक परिवर्तन भनेको तब हो जब तपाई सौर मूल्यांकन गर्नुहुन्छ र ग्राहकलाई उद्धरण प्रदान गर्नुहुन्छ र ग्राहकले तपाईको सेवा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दछ।
सौर स्थापनाकर्ता मार्केटिंग रणनीति # २: नि: शुल्क ऊर्जा मूल्या Give्कन दिनुहोस्
त्यसोभए तपाईंको बारबेक सफल भयो, तपाईंको श्रीमतीले केही राम्रो कुकीहरू पकाए, तपाईंको मनपर्ने टीमले खेल जित्यो र तपाईंको पाहुनाहरू तपाईंको सौर्य सेटअपबाट प्रभावित भए र तपाईंको सौर स्थापनाकर्ता मार्केटि strategy रणनीतिले आकार लिइरहेको छ। अब यो समय -5-१० इच्छुक व्यक्तिहरूसँग अनुगमन गर्ने समय हो जुन उनीहरूले तपाईंलाई उनीहरूको घर हेर्नुपर्दछ र उनीहरूको सम्पत्तीमा सोलर स्थापना गर्न लागत दिनुहोस् भनी भने। यी व्यक्तिहरूलाई बिक्री नेतृत्व भनिन्छ, एक बिक्री नेतृत्व एक सम्भावित बिक्री सम्पर्क हो, एक व्यक्ति जसले तपाईंको सौर स्थापना सेवामा चासो व्यक्त गर्दछ।
यो सुनिश्चित गर्न कि बिक्री प्रक्रिया सकेसम्म घर्षण रहित छ कि कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं ऊर्जा मुल्या .्कन बिल्कुल सित्तैमा प्रदान गर्नुहुन्छ। हो, मलाई थाहा छ तपाईंले गर्नुपर्ने कुरा रोक्नुपर्नेछ, उनीहरूको घरमा ड्राइभ गर्नुहोस्, तपाईंको समय र ज्ञान प्रस्ताव गर्नुहोस् जुन सबै लागतमा आउँछ र यो व्यक्ति तपाईंको सेवा प्रयोग गर्न सक्दछ वा गर्न सक्दछ तपाईंको खर्चको पूर्ति गर्नको लागि। जब तिनीहरूले तपाईंलाई सौर्य कामको लागि भुक्तान गर्छन्। तर मलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईंको पहिलो बिक्रीको नेतृत्व लिन यो पर्याप्त छ। जब म किम्रोइ बेली नवीकरणीयहरू बढ्दै थिए तब मैले व्यक्तिगत रूपमा पर्याप्त लीडहरू बन्द गरें। म हाम्रो सौर उर्जा मुल्या .्कन शुल्कको माध्यमबाट १०० डलर पुन: प्राप्ति गर्न प्रयास गर्दै थिएँ र यसको फलस्वरूप, १०,००० डलर बनाउन सक्ने सम्भावना हरायो।
ढोका भित्र एक खुट्टा राख्नु राम्रो हुन्छ (शाब्दिक) बाहिर उभिनु भन्दा किनभने तपाईं ढोका भित्र जान $ १०० चाहानुहुन्छ। यो $ १०० सौर मूल्यांकन शुल्कलाई बिक्री घर्षण भनिन्छ। एक बिक्री घर्षण आफ्नो सौर बिक्री प्रक्रिया को एक दिइएको तत्व गर्न मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। जबकि तपाईं सौर मूल्यांकनको लागि तपाईंको खर्च कभर गर्ने माध्यमको रूपमा यस शुल्कलाई औचित्य ठहराउन सक्नुहुन्छ, ग्राहक सोच्दै छन् "किन म तिमीलाई तिर्ने क्रममा तिर्दैछु?" एउटा आइसक्रिम किन्नको लागि विचार गर्नुहोस् र मालिक ढोकामा उभिन्छ र तपाईंलाई शुल्क लगाउँछ किनभने उसले आइसक्रिम चिसो राख्नु पर्छ र उसको अनुसार फ्रिज महँगो छ। तपाईंले आइसक्रीम चिसो राख्न ढोकामा उसलाई तिर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईं हिंड्नुहुन्छ र आइसक्रिमको लागि क्यासियरलाई भुक्तान गर्नुहुन्छ। तपाईंले मूल रूपमा उसलाई भुक्तान गर्न भुक्तान गर्नुभयो। जे भए पनि, म यो मनोवैज्ञानिक चीजहरूको साथ आफैंलाई कन्फ्युज गर्नु अघि मेरो औंठाको नियम यो हो; तपाईंले कम्तिमा २० सौर प्यानल प्रणाली स्थापना नगरेसम्म सौर्य मूल्याments्कनहरूको लागि चार्ज नगर्नुहोस्।
किन तपाईं २० सौर प्रणाली स्थापना नगरेसम्म पर्खनुहुन्छ?
यस समयमा दुई चीजहरू हुनुपर्दछ, व्यक्तिहरू तपाईंलाई कल गर्न र तपाईंलाई सोलर आकलन गर्न सोध्न पर्याप्त लोकप्रिय हुन्छन्। ती ग्राहक कलहरू कत्तिको गम्भीर छन् भन्ने आकलन गर्न तपाईं सौर मूल्यांकन सेवाको लागि सानो शुल्क लागू गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो, तपाईले सौर्य मूल्या so्कनका लागि यति धेरै कलहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ कि यसले तपाईको तल्लो रेखालाई जोड्न र असर गर्न सुरू गर्दछ जबसम्म तपाईं ती मूल्याments्कनको ments०% रूपान्तरण गर्नुहुन्न वा टोलीका सदस्यलाई प्राप्त गर्न सम्बन्धित लागत खर्च गर्न अन्य साधनहरू फेला पार्नुहुन्न। सौर मूल्यांकन र ती उद्धरणहरू तयार गर्नुहोस्।
सौर स्थापनाकर्ता मार्केटिंग निष्कर्ष
सम्झनको लागि द्रुत चाल यो हो कि घर मालिकलाई निःशुल्क सौर्य मूल्या assessment्कन प्रस्तावमा त्यहाँ कुनै बिक्री घर्षण छैन, तिनीहरूले चाँडै त्यस्तो उदार प्रस्ताव स्वीकार गर्दछन्। तपाईंले सौर्य आकलन पूरा गरेपछि तपाईं उद्धरण प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ र प्रार्थनापूर्वक प्रतीक्षा गर्नुहोस् तिनीहरूलाई कल गर्नका लागि र तपाईंले काम पाउनुहुनेछ। तर यदि तपाइँ सौर मूल्यांकनको लागि कसैलाई चार्ज गर्न प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, यो अब प्रस्ताव छैन तर अब बिक्री बन्छ। याद गर्नुहोस् तपाईंको नाफा सौर मूल्यांकनमा छैन, यो सौर प्रतिष्ठानहरूमा छ र स्थापनाहरू प्राप्त गर्न तपाईंलाई मूल्याments्कन आवश्यक पर्दछ।
यदि तपाईंले आधारभूत कुरालाई कभर गर्नुभएको छ र तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको बेल्ट अन्तर्गत केही सौर ग्राहकहरू छन् र ग्राहकहरूको संख्या बढाउन चाहनुहुन्छ तपाईं आफ्नो सौर्य साम्राज्य बढाउँदैमा हाम्रो अर्को लेख पढ्न सक्नुहुन्छ। यो लेखले अतिरिक्त सौर स्थापनाकर्ता मार्केटिंग टेकनीक प्रदान गर्दछ।
यो लेख पढ्न समय निकाल्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ कि तपाईले यो शैक्षिक पाउनुभयो। यदि तपाईं हामी सौर प्रतिष्ठानहरूको कुनै पनि क्षेत्रमा गहिरो जान चाहनुहुन्छ भने तपाईं नि: शुल्क परीक्षणको लागि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ सोलार स्टेप स्टेप स्थापना प्रशिक्षण कोर्स। यस लेख को तल आफ्नो रायहरु वा प्रश्नहरु जोड्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। यो हो #TeamKB हामीलाई #KelBelieving
11Feb फेब्रुअरी 11, 2013
Monthly सुझावहरू तपाईको मासिक उर्जा बिल २०% ले घटाउँन
यस पोस्टले जमैकाको ऊर्जा स crisis्कटको लागि व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत गर्दछ र जमैकालीहरूले औंलाहरू औंल्याउन रोक्छ र ... थप पढ्नुहोस्
मन्त्री इनोवेशन फोरम २०१ 2013
बिहीबार अप्रिल १,, २०१ 18 मा, पहिलो राष्ट्रिय आविष्कारक फोरम अल्फ्रेड स Sang्ग्स्टर अडिटोरियममा युनिवर्सिटीको ... थप पढ्नुहोस्
28Mar मार्च 28, 2013
प्राप्तकर्ता: अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि को लागी प्रधानमन्त्री पुरस्कार
किम्रोय बेली सबैभन्दा माननीय द्वारा सम्मानित। पोर्टिया सिम्पसन-मिलर २०१ International मा स्टेजिंगमा अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धिको लागि ... थप पढ्नुहोस्
यो भिडियो कंक्रीटमा सोलर प्यानल स्थापनाको निर्देशन DIY ट्यूटोरियलमा हाम्रो श्रृंखलाको पहिलो हो ... थप पढ्नुहोस्
25अक्टोबर अक्टोबर 25, 2016
GRID हावा र सौर्य स्थापना र लागत बन्द
नमस्ते #TeamKB, यस लेखमा किम्रोय बेली नवीकरणीयहरूले तपाईंलाई आफ्नै अफ-ग्रिड स्थापना गर्न simple सरल चरणहरू देखाउनेछ ... थप पढ्नुहोस्